IYurophu iye eAsia: IBahrain ineZiko loLungiselelo loLwandle olukhawulezayo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » IYurophu iye eAsia: IBahrain ineZiko loLungiselelo loLwandle olukhawulezayo
Iindaba zeBahrain Breaking • Cofa apha ukuba le ngxelo yakho!
I-Kingdom yaseBahrain isungule eyona ndawo ikhawulezayo yokuhambisa izixhobo kwimimandla ene-2hr kuphela yokuguqula ixesha kuzo zonke izikhongozeli-iimveliso ezinentsingiselo zinokuba kunye nabathengi kwisiqingatha sexesha nakwi-40% yeendleko.
Ukuphehlelelwa kwe "Bahrain Global Sea-Air Hub" kwenza ukuba zombini indawo ye-Bahrain phakathi kwe-Yurophu kunye ne-Asia kunye nokusondela kwiimarike ekujoliswe kuzo zengingqi ngokumisela eyona ndawo isebenzayo yokuhambisa umoya wolwandle kwindawo leyo. ukufikelela kwihlabathi liphela.
Iziko lixhomekeke kwiinkqubo zokucacisa ukucocwa, ukuphuculwa kwempahla, kunye nokwenza ikhompyuter ngokupheleleyo ukufezekisa ixesha lokugqibela lokuphela kwexesha elingaphantsi kweeyure ezimbini zeempahla ezisuka kwisikhululo senqwelomoya saseBahrain ukuya eKhalifa bin Salman Port, ngokuchaseneyo.
Ezi nzuzo ziguqulela kwiipesenti ezingama-50 zokuncitshiswa komndilili wexesha lokuthelekisa xa kuthelekiswa nemithwalo yolwandle engaxutywanga kunye nokwehla ngama-40% kwiindleko xa kuthelekiswa nemithwalo yomoya emsulwa. Ngokuhambelana, ihabhu yomoya wolwandle waseBahrain isebenza njengenye indlela exabisekileyo kubavelisi kunye nabathumeli beempahla, ngakumbi kwimeko yengxaki yokuhambisa ngenqanawa eqhubekayo.
I-Bahrain iya kunika inqanaba leQabane kweli nyathelo kuzo zonke iimarike kwihlabathi liphela eziya kuthi zivumele ukuba zinike iinkampani zabo zikazwelonke ithuba lokuba yi-Trusted Shipper egunyazisiweyo kwi-Bahrain's Global-air-logistics hub.
Umphathiswa Wezothutho kunye noNxibelelwano, u-Kamal bin Ahmed uthe:
“Ukuphehlelelwa kwesi sixhobo seLog-to-Air sokuhambisa izinto, esikhawulezayo eMbindi Mpuma, apha e-Bahrain lithuba lokwenyani hayi nje kuphela kwiinkampani zamalungiselelo ehlabathi kodwa nakubathumeli kwilizwe jikelele. Le nkonzo ingakhokelela ekongeni amaxabiso ama-40% xa kuthelekiswa nemithwalo yomoya kuphela kunye nama-50% akhawulezayo kunalawo aselwandle. ”
Wongeze wathi: "Singayenza le nto kuphela ngenxa yesikhundla esikhethekileyo, ukusondela kwamazibuko ethu, kunye nabalawuli bethu, abasebenza kunye nabasemagunyeni basebenza ngokusondeleleneyo kunye nesisombululo sethu sobuchwephesha bokulungiswa kwedijithali."
Eli ziko liza kwenza ukuba ukukhula kwecandelo lezolimo laseBahrain eliya kuthi libe negalelo ekuqhubekeni kwahlula uqoqosho loBukumkani. Ukukhula konyaka kwe-Bahrain ye-non-oyile ye-GDP ngonyaka-ukuya kufikelela kwi-7.8% kwi-Q2 ngo-2021.
Ixabiso lokusebenza kwicandelo lezokulungiselela li-45% isezantsi eBahrain xa kuthelekiswa neemarike ezingabamelwane, ngokweNgxelo ye-KPMG ye-2019 "yeendleko zokwenza ishishini kuLogistics". Oku kubeke iBahrain njengendawo enomtsalane kumashishini ehlabathi nawengingqi asebenza kwicandelo.
Malunga noMphathiswa Wezothutho kunye noNxibelelwano ngocingo (MTT)
Icandelo loMphathiswa Wezothutho kunye noNxibelelwano ngomnxeba (MTT) licandelo likarhulumente elinoxanduva lokuphuhlisa kunye nokulawula ukuhanjiswa kobukumkani kunye neziseko zonxibelelwano zonxibelelwano kunye neenkqubo.
Ngenjongo ebanzi yokuphucula umgangatho wobomi kunye nokuququzelela ukuhamba kwabantu kunye neempahla ngomhlaba, ulwandle, kunye nokuthuthwa komoya ngokuhambelana noMbono wezoQoqosho 2030, i-MTT inikwe uxanduva lokuphucula uthutho olulungelelanisiweyo noluzinzileyo kunye nomzi mveliso wonxibelelwano ukuxhasa uBukumkani. ukukhula kwezoqoqosho.